on: असार १८ , २०७९ शनिबार- ०९:४३
योगमायाको कविताहरूले प्रभावित भएर उनका अनुयायीहरू बढ्दो क्रममा थिए भने उतातिर उनी आफैँ जुद्द शमशेरलाई भेट्ने तयारीमा थिइन् । धेरै समयको पर्खाइपछि आज योगमाया जुद्ध शमशेरसँग भेट्न जाँदै थिइन् । पशुपति अगाडि आफ्नो केही सेनाहरूसँग बसेका जुद्ध शमशेरतिर योगमायाको आँखा गयो । भेटको स्वागत पछि, उनीहरू बिच केही बेर भलाकुसारी	Read more
on: असार १५ , २०७९ बुधबार- १०:०४
गोरखपुरको ठाकुर दयाराम सिंहको छोरी म गोरखा दरबारमा आइपुगेपछि नरेन्द्रलक्ष्मी बनेँ । गोरखपुरको समथर र गर्मी ठाउँमा जन्मिएर हुर्केकी मलाई सुरुमा यहाँको चिसोमा रहन कठिन परेको थियो । मलाई भानु जोशी नाम गरेका पण्डितले पृथ्वीनारायणका लागि डोला झिकाएका थिए । बाबु आमाले जहाँ पठाए त्यहाँ जानु पर्ने छोरीहरूको	Read more
on: असार १३ , २०७९ सोमबार- ०६:४०
श्री ५ बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो कोठामा विश्राम गरिरहेका थिए । उनकी पत्नी रानी नरेन्द्रलक्ष्मी कोठामा आइन् र आफ्नो श्रीमानको थकित अनुहार देखेर भनिन्, “महाराज हजुर ! निकै थकति देखिबक्सिन्छ नि ।” राजाले भने, “हो रानी, आज अलि थकित नै छु । बुबा महाराजको पालदेखि नेपाल खाल्डोमाथि सर गर्ने	Read more
on: असार १० , २०७९ शुक्रबार- ११:३६
श्री ३ जङ्गबहादुर राणा थुप्रै विवाहका बन्धनमा बाँधिएका थिए । उनले आफ्ना पत्नीहरूलाई दरबारमा एउटा एउटा पद दिएका थिए । उनलाई यतिले सन्तुष्टि भएन र फेरि अर्को विवाह गर्ने चाहना राखे । त्यसपछि उनको नजर चौतरीया खलकमा प्राण सिंहको छोरी हिरण्यगर्भकुमारीतिर प¥यो । हिरण्यगर्भकुमारीको हात माग्न भनी	Read more
“मुमा हजुर, दाजुभाइले बुबालाई सत्ता सम्हाल्न सघाउलान् नि त, मैले त केही पनि गर्नु नपर्ला जस्तो लागिराखेको छ, खै किन हो !” चक्रभतेन्द्रले रानीसँग नम्रतापूर्ण सोधे रानी खिसिक्क हाँसिन् र भनिन्, “तिमी भोजन गरेर सुत्न जाऊ ।” भोलिपल्ट अरु दिन जस्तो दरबारमा एक किसिमको रौनक थिएन । बागमा चराचुरुङ्गी	Read more
गोरखा दरबारमा महारानी कौशल्यावती गर्भवती भएको हल्ला फैलियो । बाह्र हजार गोरखाको उत्तराधिकारीले गर्भमा बस्न आएको घटना आफैमा खुसीको विषय थियो । महाराज नरभूपाल आफ्नी श्रीमती गर्भवती भएको खवरले निकै आनन्द मानिरहेका थिए । उनी सन्तानको मुख हेर्न आतुर थिए । दरबारमा महारानीको खानपान र स्याहार सुसारमा अझ	Read more
अनुभूति – सहारा लोहनी
on: जेष्ठ २८ , २०७९ शनिबार- ०८:४३
“महारानी ? महारानी ?” राजेन्द्रलक्ष्मी जुरुक्क उठिन् । घोडाले भुइँमा छुनेबित्तिकै उनी चिसोले सिरिङ्ग भइन् । “हिरामाया ?” उनले बोलाइन् । चुरा बजेको आवाज आयो । “महारानी, मैले पानी ल्याएको ।” हिरामायाले भनी । अलि अँध्यारो थियो । त्यसैले हिरामायाको अनुहार देखिएन तर अम्खरा जेलको डण्डीमा ट्वाङ गरेको आवाज आयो	Read more